४० मिनेटमा दर्ता भयो नयाँ शक्ति ,एक तारामा दावी ! – YesKathmandu.com
४० मिनेटमा दर्ता भयो नयाँ शक्ति ,एक तारामा दावी !
काठमाडौं । गत जेष्ठ ३० गते पार्टी घोषणा सभा गरेको नयाँ शक्ति नेपालले आफ्नो दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा आज निवेदन दर्ता गराएको छ । भृकुटीमण्डपमा नेता तथा कार्यकता एकीकृत भएर निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर नयाँ शक्ति पार्टीका नाममा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो । दल दर्ता १२ बजेर ३५ मिनेट जाँदा सुरु भएर १ बजेर १५ मिनेट जाँदा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा ४० मिनेट समय लगाएर उस्ले दल दर्ता गराएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्तिले दल दर्ता गर्नका लागि संयोजक भट्टराईसगैं नेतृ हिसिला यमी, खिमलाल देवकोटा, रामचन्द्र झा,करिष्मा मानन्धर, निर्मल भट्टराईलगायतका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए । दल दर्ताका लागि कार्यालयमा निवेदन बुझाएर बाहिरिने क्रममा संयोजक भट्टराईले ‘अगामी हुने संसदिय, प्रादेशिक र स्थानिय तीन वटै निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने गरी काम गर्ने ’प्रतिक्रिया दिएका छन । उनले भने—पार्टीका पाँच ‘स’का अवधारणा जुन हामीले अघि सारेका छौं, त्यसको प्रमुख अवधारणा भनेकै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो । हामीले नारामा नै भनेका छौं, ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’, ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ । यो नै हाम्रो मुख्य ध्येय हुन्छ ।
संयोजक भट्टराईले पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेकाले लोकतान्त्रिक तवरले काम गर्ने पनि सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए । त्यसैगरी, विभिन्न पार्टीका भेलामा सहभागी भएका नेता तथा कार्यकर्ताको नामावलीसहित, पार्टीको विधान, झण्डा, लोगोसहित असार २५ गतेसम्मको आयव्याय विवरण पनि निर्वाचन आयोग आयोगमा बुझाइएको नयाँ शक्तिका प्रवक्ता खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए । नयाँ शक्तिले ९६ जना केन्द्रिय सदस्यको नामावली पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ । उसले एक तारा अंकित झण्डा आफ्नो चुनाव चिन्ह हुनुपर्ने दावी गरेको छ । त्यसैगरी, पार्टीले बुझाएको विधान, नियमावली, घोषणा पत्र सबै प्रमाणित भए यसै आर्थिक वर्षभित्र दल दर्ता हुने कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन् ।
वढ्दै दल खारेजी
निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या १ सय ८० पुगेको छ । तर नविकरण,महाअधिवेशन सम्पन्न नगरेका कारण देखाउदै आयोगले दल खारेज गरिरहेको छ । सोही कारण हाल कतिवटा दल छन भन्ने कुरा खुलाउन सकिएको छैन । स्मरणीय छ,यस्तै खारेजीमा पर्ने दलमध्य हाल खानेपानी मन्त्री रहेका प्रेम बहादुर सिंहको दल समेत यही सूचीमा छ । यद्यपि केही साता अगाडि मात्रै उस्ले महाअधिवेशन गराएको छ ।
विरामीको मुटु छाम्दै,संगीतमा जम्दै सरिता
त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको मिति तोक्यो, फागुन १४ गते निर्वाचन हुने
संविधान संशोधन नभए चुनाव होइन, युद्ध हुन्छ : राजेन्द्र महतो
प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एक करोड ६४ लाखको झड्का
चितवन क्षेत्र नं ३ मा काँग्रेस फकाउँदै दाहाल, एमाले फकाउँदै पाण्डे
यस्तो छ एमालेले देखेको महत्वकाक्षी सपना
प्रदेश २ मा राजपाले खाता खोल्यो,हंशपुर नगरपालिकाको मेयरमा रामज्ञान मण्डल विजयी
कांग्रेसलाई सरकार परिवर्तनको बखेडा नझिक्न माधव नेपालको चेतावनी
चुनावमा सहभागी हुने विषयमा राजपा अध्यक्ष मण्डलमै मतभेद
काभ्रेका तीन ग्यास उद्योग बन्द गर्न नापतौल तथा गुणस्तर विभागको निर्देशन
नेविसंघका नेतालाई रामशरणको सुझाब, ‘नेताको चाकडी नगर्नु’
सवारी दुर्घटनाबाट छ महिनामा १०५ को मृत्यु
शेयर मार्केट भवनको आगलागीले बालुवाटारसम्म ट्राफिक जाम, क्षतिको विवरण आउन बाँकी
प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसारको भएको निर्वाचनको नतिजा स्वीकार्नुपर्छ :- नेता सिंह
सभापति देउवाले एक दर्जन कलाकर्मीको घाँटीमा फूलमाला लगाउँदै